AL-SHABAAB OO SADDEX RUUX KU GOWRACDAY KENYA IYO XIISADO KA TAAGAN GOBOLKA XEEBTA – Shacabka News
AL-SHABAAB OO SADDEX RUUX KU GOWRACDAY KENYA IYO XIISADO KA TAAGAN GOBOLKA XEEBTA
Wararka ka imanaya deegaanka lagu magacaabo Maleli oo ka tirsan degmada Lamu dalka Kenya, ayaa sheegaya in Al-shabaab saddex ruux oo deegaanka ah ku gowraceen.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka la gowracay ay gaarayaan afar qof, balse Guddoomiyaha Gobolka Lamu, Gilbert Kitiyo ayaa Wareysi uu siiyay Wargeyska Daily Nation ku sheegay inay dadka la qalay yihiin Seddex qof.
Sidoo kale, dableyda weerarka geystay ayaa la sheegay in ay halka ku gubeen guryo dhowr ah sidda ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka oo arintan cabsi iyo anfariir ka qaaday.
Goob-joogayaaha ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay tuulada weerareen saacadaha markay ahayd 12:30am habeenimo xilli dadka ay hurdayeen, ayna saddexda qof gurigooda ugu tageen ayna halkaas ku gawraceen.
Dhanka kale, Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dableydu ay baadigoob ku hayeen ragga halka ay iska dhaafayeen haweenka iyo caruurta. Iyadoo intaa lagu daray inay dilka kaddib hawdka ku carareen kooxah dhibaatada geystay oo aan la garanayn meel ay aadeen.
Xukuumada Kenya ayaa sheegtay in kooxdan ka tirsan Ururka Al-shabaab ay ku duumaaleysanayaan deegaanka Boni, halkaasoo ah meel dhir badan, isla markaana ay dhib badan tahay in laga soo qabto kooxahan.
Ugu dambeyn, Ma ahan markii ugu horreysay oo Al-shabaab ay weeraraan Gobolka Xeebta Kenya ku yaalla Mana jiro dhinaca Al-shabaab wax war ah oo ka soo baxay oo la xiriira dilka saddexda ruux waxaana soconaya baaritaanno arintan la xiriira oo ay wadaan saraakiisha amniga.
Previous Previous post: Raysal Wasaaraha Dowladda Soomaaliya oo War Culus ka soo saartay weerarkii ka dhacay Gudaha dalka Spain…
Next Next post: Ugaas Xassan Ugaas Khaliif oo kulan deg deg ah ku baaqay